भिडियोकै आधारमा रवि प’क्रा’उ पर्दा महरा किन नपर्ने ? ठूला-ठालुलाई कानुन लाग्दैन ? – ईमेची डटकम
भिडियोकै आधारमा रवि प’क्रा’उ पर्दा महरा किन नपर्ने ? ठूला-ठालुलाई कानुन लाग्दैन ?
काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका नेता धनराज गुरुङले कृष्ण बहादुर महरा प्रकरणमा महिलाले बयान फेर्नु शंकास्पद रहेको बताएका छन्। बुधबार अन्तर्वार्ता दिँदै गुरुङले पीडित महिलाको बयानको भिडियो बाहिर आएको एक दिन नबित्दै बयान फेरिएको विषयमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने बताएका छन्।
प्रमाणसहित मिडियामा आइसकेको र यसैको आधारमा महराले राजिनामा दिसकेको हुँदा गम्भीर भएर घ*टनाको अनुसन्धान गर्नु पर्ने गुरुङले बताएका छन्। पत्रकार सालिकराम पुडासैनी प्र*करण कुनै किटानी जाहेरी बिना भिडियोकै आधारमा रवि लामिछाने प*क्राउ परेको उल्लेख गर्दै गुरुङले महरा माथि पनि अनुसन्धान थालिनुपर्ने बताएका छन्।
पिडित भनिएकी महिलाले दबाबमा आएर बयान फेरेको हुन सक्ने गुरुङको अनुमान छ। गच्छेअनुसार ललाई, फकाई, लोभलालच देखाई, ड*र, त्रा*स, द*बाब आदि जुनसुकै हर्कत गरेर बयान फेर्ने चलनले गर्दा यस्ता घट्नाहरु झन्झन् बढ्दै गइराखेको उनले तर्क गरेका छन्। महरा प्र*करणमा राज्यको एउटा सम्मानित पदमा रहेको व्यक्ति जोडिएकोले यसलाई छिटोछिटो छा*नविन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।